Yekutanga Yucera's Jobho Unyanzvi Kukwikwidza
ne admin pane 21-07-23
Yekutanga kukwikwidzana kwehunyanzvi hwebasa kweYucera ye zirconia block zvinhu zvakatanga musi waChikunguru 12 th, iyo yakatsigirwa neGeneral Manager Hofisi. Chiitiko chese chakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: kunyoreswa uye kuongorora, pamakwikwi epamasaiti, uye pikicha yeboka rinopa mibairo. Vanopfuura makumi matatu ...
Iva akasimba muchinangwa chako, uye ramba uchikurudzira.
Yu Rucheng's 2021 semi-pagore musangano wepfupi wakaitwa mukukudza. Pasi pehutungamiriri hwamaneja mukuru VaLiu Jianjun, vepamusoro vebazi rekushambadzira vakauya pamwe nezviroto zvavo, vachipfupisa kushomeka kwebasa muhafu yekutanga ye th ...
Yucera haambomise nhanho yavo kuenda kumberi.
ne admin pane 21-06-22
Sehunyanzvi hwekugadzira yeCAD CAM yemazino zirconia zvedongo mabhuroko, Yucera ine basa re "kuzvipira kugadzira yepamusoro uye hutano mazino zirconia zvinhu uye kuvaka inozivikanwa pasi rose mhando yemazino zirconia zvinhu"; Yucera haambomise nhanho yavo kuenda kumberi. Con ...
Iyo Dental South China 2021 International Exhibition zviri pamutemo yakasvika kumagumo pane yakakwana chinyorwa.
ne admin pane 21-06-17
Iyo Dental South China 2021 International Exhibition zviri pamutemo yakasvika kumagumo pane yakakwana chinyorwa. Shenzhen Yurucheng Dental Zvekushandisa Co., Ltd. ramba uchitsika kumberi-wadhi! Mazuva mana emazino Saka ...